एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका सचिवालय सदस्य सुदर्शनबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ? — onlinedabali.com
एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपाका सचिवालय सदस्य सुदर्शनबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ बीच भेटवार्ता भएको छ । बुधबार साँझ भएको भेटमा तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनलगायत समसामुहिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको थियो ।
भेटमा सहभागी नेकपाका युवा नेता भीम चापागाईँका अनुसार ओलीले तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहाई हुनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको भन्दै त्यसको लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत जाहेर गरेका थिए ।